Intyatyambo eluhlaza okwesibhakabhaka, intsingiselo yale tattoo imangalisayo | Ukuzoba
Intyatyambo eluhlaza okwesibhakabhaka, intsingiselo yale tattoo inzima
Un tattoo intyatyambo ye ilotus Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka uphefumlelwe yenye yezona ntyatyambo zinomdla kwaye ziyindida, ilotus, uphawu lokhanyo.
Ngaba kuthetha okufanayo kwimeko yokuba ine-hue eluhlaza okwesibhakabhaka? Sibona ngezantsi!
1 Umqondiso wale ntyatyambo ye-lotus
2 I-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka kumaYiputa
Umqondiso wale ntyatyambo ye-lotus
Intyatyambo ye-lotus yintyatyambo esiyidibanisa ikakhulu nobuBuddha, kuba le nkolo isetyenziswa, yona, ukuyidibanisa nokukhanya. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka (nangona ngokwendalo uya kuhlala ubona ukuba lilac, kuba umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngumbala onzima kakhulu ukufumana phakathi kweentyatyambo) kubonisa ukuqonda kunye nobulumko, ngaloo ndlela kuqiniswa umyalezo wokuqala.
Kodwa, ukongeza, inentsingiselo yoqobo eyahlula kwezinye iintlobo zelotus: uloyiso lomoya. Le ntsingiselo ingenxa yeentyatyambo uqobo, eziqhakaza ngobuhle obumangalisayo kwiindawo ezinjengemigxobhozo kunye neebhogi.
Kwi tattoo intyatyambo ye-lotus inokumelwa kunye namagqabi avulekileyo ukufuzisela ukuba umntu onxibe isiziba usesekwinkqubo yokufunda.
I-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka kumaYiputa
Intyatyambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukongeza kubuBuddha, ikwanentsingiselo ebaluleke kakhulu kumaYiputa, kuba, enyanisweni, intyatyambo izalelwe kweli lizwe. Iindidi zase-Yiphutha, ngasendleleni, zahlukile kwezinye iintlobo zeelotus, njengoko zinamacala amhlophe amhlophe aqaqambe ngombala oluhlaza.
EYiputa, Ii-lotus zalo mbala zinxulumene nothixo welanga kunye nokuzalwa kwakhona. Oku kunokubangelwa yinto yokuba ii-lotus zivela emanzini, zidubula ukusuka kusasa kude kube sebusuku, zivula amagqabi elangeni, zibuye zibuyele emanzini ngokuhlwa.
Siyathemba ukuba ulithandile eli nqaku malunga nentyatyambo ye-lotus eluhlaza okwesibhakabhaka kwaye yakwenzela ukukunika imibono emitsha okanye, ubuncinci, ukucacisa intsingiselo yayo. Khawusixelele, unayo itattoo enje? Sazise kumagqabantshintshi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Intyatyambo eluhlaza okwesibhakabhaka, intsingiselo yale tattoo inzima
I-Sparrow tattoos, intaka enenyameko kakhulu
Iindidi zeminqamlezo kunye neeTatoo eziphefumlelwe ngabo